AMISOM oo duqeysay deegaano dhaq dhaqaaqyo ciidan ka wadeen Al-Shabaab – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in Ciidamada AMISOM ee saldhiga ku leh deegaanka Leego ay xalay duqeeyeen deegaano hoos taga degmada Wanlaweyn.
Duqeyntan ayaa ka dambeysay markii Ciidamada AMISOM ka war heleen dhaq dhaqaaq ciidan oo Al-Shabaab ka wadeen deegaano u dhaxeeya Leego iyo Yaaqbari weyne.
Wararka ayaa sheegaya in AMISOM ay u duqeysay deegaanada cabsi ay ka qabtay weeraro gaadmo ah oo Al-Shabaab ku soo qaadaan saldhigooda.
Guddoomiye kuxigeenka Gobolka Shabeellaha Hoose C/fataax Xaaji Cabdulle ayaa sheegay in duqeynta ay ka dambeysay markii AMISOM ay maqleen in lagu soo dhowaaday.
“Duqeynta Ciidamada waxay sameeyeen markii loo sheegay in lagu soo dhowaaday, taas ayaa waxay keentay inay diraan diyaarado yar yar oo kaamirooyin ku xiran, markaasaa la ogaaday dhaq dhaqaaqa Al-Shabaab wadeen”ayuu yiri Guddoomiye kuxigeenka Shabeellaha Hoose.
Dadka deegaanka Wanlaweyn ayaa u maleynayay in duqeynta ay aheyd diyaarado, balse markii dambe ayaa la ogaaday in madaafiicda dhacayay ay aheyd kuwo laga soo ridayay saldhiga AMISOM.
Sanadkii hore ayay aheyd markii Al-Shabaab weerar ku qaadeen saldhiga Ciidamada AMISOM ku lahaayeen deegaanka Leego, kaasoo lagu dilay ku dhowaad 70-askari.